Nageenyi ajandaa miidiyaalee ta'uu qaba
Waggaa 23n har'aa, dhuma ji'a Sadaasaatti lammiileen biyyattii marti bakka buutotasaanii fedhii ofiitiin filatanii Finfinneetti ergan. Namoonni bakka bu'ummaan argamanis sanada waadaa wajjummaa nageenyaa, dimokraasiifi misoomaa raggaasisuuf ture.
Yaa'ii heeraatiin Sadaasa 29 bara 1987 kan ragga'e heerri RFDI, waggoota digdamman darbanitti mirgoonni dhuunfaa, sabootaafi sablammiilee akka kabajamaniifi walqixxummaan koorniyaa, amantiifi aadaa loogii tokko malee akka mirkanaa'aniif ulaa baneera.
Saboonni, sablammoonniifi ummatoonni Itoophiyaa galaa nageenya waaraafi dimokraasii wabii qabuu waggoota 23 har'aa dhugoomsuu galeeffataniin guddina hawaas-dinagdee lammiilee si'eessuu akkasumas kaayyoo hawaasa siyaas-dinagdee tokko ijaaruuf qabame milkeessuuf tattaaffiileen adda addaa taasifamaa turaniiru. Kanaanis jijjiiramoonni sadarkaa biyyoolessaatti jajaman galmaa'aniiru.
Eddii heerri RFDI ragga'ee hojiitti seenamee as ummatoonni biyyattii mirgoota namummaafi dimokraasii alaalatti hawwaa turan shaakaluufi dhamdhamuu jalqabaniiru.
Saboonni, sablammoonniifi ummatoonni sabummaasaaniitiin, halluu gogaasaaniitiin, addummaa koorniyaafi amantii fa'iin dirqamanii hamileensaanii akka cabu taasifamanii turan wabii heerichaan argataniin aadaa, duudhaafi afaan ofii daangaa tokko malee guddifachuuf, qabeenya biyyattiitti haala haqaqabeessa ta'een fayyadamuuf, yaada ofii bilisaan ibsachuuf, naannawa filatan kamuu jiraachuufi naanna'anii hojjechuufi kkf gonfataniiru.
Biyyattiitti seenaan miidiyaalee walakkaa jaarraatii ol yoo lakkoofsisellee miidiyaaleen kunniin jaalatamanis jibbamanis olola sirna keessa turanii hafarsuurra kanneen komii ummataa baasan, hojmaanni badaan sirnichaa akka sirraa'uuf hincarraaqne, akkasumas nageenyi, misoomniifi dimokraasiin akka lalisuuf, fayyadamummaa lammiilee akka mirkanaa'uuf tattaafataa hinturre.
Akkuma mirgootaafi bilisummaawwan sabootaa, sablammiileefi ummatootaa mirgi bilisummaa miidiyaalee biyyattii wabii heeraa sirnaan kan argate waggoota 23 darban keessatti. Kana keessattis dhimmoota ijoo heerichi xiyyeeffannaa kenneef keessaa mirgi dimokraasii yaadaafi ilaalchaa ofii bilisummaan ibsachuu adda durummaan kan eeramuudha.
Akkuma keyyattoota xixiqqoo keeyyata 29 jala jiran keessatti ifaan ibsametti “Pireesiifi miidiyaaleen biroo akkasumas walabummaan kalaqa aartii” mirkanaa'eera.
Miidiyaaleen biyya keenyaa akkuma kan biyyoota biroo walabummaa gonfatanitti fayyadamuun walitti bu'iinsonni akka hinuumamneefi bu'uurri nageenyaa akka cimuuf, ummatoota jidduutti jaalalliifi tokkummaan akka jabaatuuf, mirgoonni namummaafi dimokraasii akka kabajamaniif, hojmaanni badaaniifi rakkooleen bulchiinsa gaarii akka furamaniif akkasumas sirni gaafatamuu akka hidda gadi fageeffatuuf xiyyeeffannaan hojjechuu qabu.
Miidiyaalee danuun mirgoonni namummaafi dimokraasii akka kabajamaniif, malaammaltummaafi hojmaatiwwan badoon akka dhabamsiifamaniif, addunyaarra nageenyi amansiisaan akka jiraatuuf qoodasaanii bahataniiru; bahataas jiru.
Miidiyaaleen biyya keenyaas waggoota darbanitti mirgoonniifi bilisummaawwan akka mirkanaa'aniif, duudhaaleen, afaaniifi aadaan sabootaafi sablammiilee akka dagaaganiif, waliigalteen biyyaalessaa akka dhugoomuuf tattaafataa turaniiru.
Ministirri Waajjira Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Federaalaa, Doktar Nagarii Leencoo miidiyaaleen haala kamiinuu waa'ee nageenyaa lallabuu akka qaban oggaa ibsan, "Miidiyaaleen yeroo waan mirgoota lammiilee sarbu gabaasan diina ummataa ta'uusaanii mirkaneeffataa jiraachuusaanii hubachuu qabu” jedhan.
Biyya ilaalchi sassaabdummaan kiraafi gochisaa jirutti nageenyarra waa'ee jeequmsaa dursuun, tokkummaarra adda addummaa lallabuun kisaaraa malee bu'aa waan hinqabaanneef gocha badaa akkanaa raawwachuurraa fagaachuun daran murteessaadha. “Otoo gochi badii akkanaa bu'aa qabaata ta'ee dhumaatii lammiilee Ruwaandaa kuma 800f sababa ta'an miidiyaaleen biyyattii eessa qaqqabuuyyu” jedhu ministirichi.
Kanaafuu, xiyyeeffannaan miidiyaa kamuu gochoota sirna dimokraasiifi nageenyaatti gufuu ta'an seecca'anii baasuun ummanniifi mootummaan akka irratti mariyatan gochuun ittigaafatamummaasaanii bahachuu ta'uu qaba. Ajandaan miidiyaalee hundaas yeroo kamuu nageenyaafi nageenya lallabuu qofa ta'uu qaba.
Torban kana/This_Week 17529
Guyyaa mara/All_Days 1442309